नीतिका कुरा : कहाँ बस्छन् ईश्वर ? | Kendrabindu Nepal Online News
२० फाल्गुन २०७६, मंगलवार १३:५९
कुनै समय भगवान दोधारमा पर्नुभयो । मनुष्यको बढ्दो साधनाबाट उहाँ प्रशन्न त हुनुहुन्थ्यो तर समस्यामा पर्दा मात्रै दौडेर भगवानको चरणमा पर्ने र केही न केही माग्ने मनुष्यको स्वार्थी र असन्तोषी व्यवहारले गर्दा भगवान अत्यन्त दुःखी हुनुभयो । उहाँले त्यो समस्याको समाधानका लागि देवताहरुलाई बोलाएर भन्नुभयो, “हे देवताहरु ! मनुष्यको रचना गरेर म समस्यामा परेको छु । हरेक समय कोही न कोही मनुष्य म सँग गुनासो मात्रै गर्छ । जसकारण न म शान्तिपूर्वक बस्न सकिरहेको छु, न त तपस्या नै गर्न सकिरहेको छु । तपाईंहरु मलाई यस्तो ठाँउ बताउनुहोस्, जहाँ मनुष्य नामको प्राणी कहिल्यै पुग्न नसकोस् ।”
प्रभूको विचारलाई आदर गर्दै देवताहरुले आ–आफ्ना विचार पोखे । “हजुर हिमालय पर्वतमा जानुहोस् प्रभू ।” गणेशजीले भन्नुभयो । “हे गणेश ! हिमालय पर्वतमा मनुष्य सजिलै पुग्न सक्छ, त्यसकारण त्यहाँ जानु व्यर्थ हुन्छ ।” भगवान्ले प्रेमपूर्वक भन्नुभयो ।
त्यस्तै इन्द्रदेव र वरुणदेवले महासागर र अन्तरिक्षमा जान सल्लाह दिए । श्री भगवानले सबै देवतालाई एकदिन मनुष्य त्यहाँ पनि पुग्ने कुरा बताउनुभयो । “के यो ब्रहमाण्डभरि मेरो लागि शान्त र एकान्त ठाउँ नै छैन त ? जहाँ म ढुक्क भएर बस्न सकुँ ?” भगवानले निराश भएर भन्नुभयो । अन्त्यमा सूर्यदेवले भन्नुभयो, “प्रभू हजुर अन्त कतै नगएर मनुष्यकै हृदयमा बिराजमान हुनुहोस् ।
मनुष्य अनेक स्थानमा हजुरलाई खोज्न भौँतारिनेछ तर आफ्नो हृदयमा कदापी खोज्नेछैन ।” भगवानलाई सूर्यदेवको कुरा चित्त बुझ्यो र सूर्यदेवले भनेजस्तै गर्नुभयो । त्यस दिनदेखि मनुष्य ईश्वरलाई खोज्न तल, माथि, दायाँ, बायाँ, आकाश तथा पातालमा भौँतारिरहेको छ तर आफ्नो हृदयभित्र बस्नु भएका श्री भगवानलाई देख्न सकिरहेको छैन ।
Prevआज राति १० बजेदेखि प्रधानमन्त्रीले केहि खान नहुने
१९ जना सांसदहरुको आज पदावधि सकिँदैNext